प्रतीक्षा, Trip — Didn't You Retire? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
मा 2012, म हुन चाहन्छु घोषणा "संगीत बाट टाढा stepping।" हो, मलाई थाहा छ कि अवकाश-इश सुनिन्छ, तर म जानबूझ कि शब्द प्रयोग गरेनन्. म थिएन किनभने म यो जानीबुझी अस्पष्ट राखिएको 100% यो कस्तो खोज्नुहुन्छ निश्चित.
म यो सम्भव थियो थाह थियो "असल जीवन" मेरो अन्तिम एल्बम थियो, तर म निश्चित थियो. यहाँ के मलाई थाहा थिएन छ: त्यहाँ आमूल परिवर्तन गर्न म संगीत सम्बन्धित कसरी हुनेछ एक विशाल प्राथमिकता पारी हुनेछ. म धेरै मेरो सँगी emcees संग बाटोमा बाहिर हुन छैन. म नयाँ संगीत को एक गुच्छा बाहिर सनकी गर्न सक्षम छैन. म एक पूर्ण समय Rapper हुन छैन. म पास्टर परमेश्वरको चर्च मदत गर्न चाहनुहुन्थ्यो थाह.
त्यो समय देखि, म वाशिंगटन D.C मेरो चर्च मा सेवा गरिएको छ. विभिन्न pastoral भूमिका मा. म व्यवस्थापक काम गरेका छौँ, प्रचार र शिक्षण, युवा सेवाको, वैवाहिक परामर्श, आदि. म कुनै पनि शो किनभने चर्च जिम्मेवारी को गीत को एक पल्ट गरिरहेको वा लेखन बिना महिना भयो. म पनि बाहिर बसे पनि 2013 Unashamed यात्रा. र हुनत म नयाँ संगीत सिर्जना छुटेका, म गरिरहेको छु प्यार. स्वास्थ्य समस्याहरू यसलाई कहिलेकाहीं चुनौतीपूर्ण बनाएको छ, तर यो मेरो परिवार र मेरो लागि इनामदायी सिजन भएको.
पूर्ण-समय pastoral सेवकाईको भनेर पहिलो वर्ष पछि, म बिस्तारै नयाँ रेकर्ड मा काम सुरु गर्ने निर्णय. मेरो रचनात्मक रस अप बोतलबंद गरिएको थियो, र म जान तयार थियो. तर यसको सट्टा गैर-स्टप लेखन र रेकर्डिङ को एक पाँच वा छ महिना फट को, संगीत मेरो पूर्ण समय काम थिएन देखि यो एल्बम ढिलो र स्थिर थियो. म बिस्तारै हरेक गीत शिल्प भएकोले त्यो ठूलो बाहिर काम, र यो सकेसम्म पूर्णता नजिक प्राप्त.
म एक निर्माता यो समय काम गर्न निर्णय, बरु विभिन्न मान्छे एक गुच्छा देखि ट्रयाक सबमिशनहरू स्वीकार को. म Gawvi गर्न विचार ल्याउँदा त्यो प्रेम, र हामी प्रत्येक अन्य अविश्वसनीय कुरा गर्न धक्का. यसलाई देखि परिवार र मण्डली जिम्मेवारी दूर प्राप्त गर्न कठिन थियो किनभने म अटलान्टा गरिएका हरेक यात्रा महत्वपूर्ण थियो. तर यहाँ हामी पछि एक वर्ष भन्दा बढी छन्, र यो लगभग बाहिर छ!
मलाई थाहा केही मानिसहरू भविष्यमा अझै पनि मलाई आशा गर्न के भ्रमित छन्. त्यहाँ मेरो लागि धेरै unknowns छन्, म थाह के तर म तिमीलाई छौँ:
– म अझै पनि पास्टर हुन चाहनुहुन्छ.
– म अझै पनि संगीत गर्न चाहनुहुन्छ.
– म अझै पनि र्याप र बोल्न यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ.
– म अझै पनि पुस्तकहरू लेख्न चाहनुहुन्छ.
र म पत्ता लगाउन कसरी वा यदि म परमेश्वरको आदर हुने तरिकामा ती कुराहरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ प्रयास छु, अझै पनि मेरो परिवार र परमेश्वरको चर्च विश्वासी भएर गर्दा.
हुनेछ “उठेर” मेरो अन्तिम एल्बम हुन? यो हुन सक्छ, तर म आशा. अहिलेको लागी, म क्षण आनन्द र तपाईं सबै साझा म मेरो सबैभन्दा काम छैन विचार के गर्न चाहनुहुन्छ. एक धेरै देखि परिवर्तन भएको छ 2012, तर एउटा कुरा नै रहन्छ: येशूले प्रभुको छ, र म मेरो संगीत उहाँलाई आदर गर्न चाहनुहुन्छ.
माइकल • अक्टोबर 8, 2014 मा 4:47 छु • जवाफ
IA € ™ यात्रा Leea € ™ को नयाँ संगीत सुन्न आनन्दित हूँ. ™ टी नयाँ एल्बमका लागि प्रतीक्षा सकिंदैन. साँच्चै एक प्रतिभाशाली मान्छे
टोनी • अक्टोबर 8, 2014 मा 8:32 छु • जवाफ
राम्रो दिन मेरो राम्रो भाइ? यसको संगित लागि आफ्नो आवेग र इच्छा अझै पनि आफ्नो नसाहरु मार्फत प्रवचन मार्फत Godâ € ™ को फैलाउन आफ्नो इच्छा रूपमा साथै बगिरहेको छ एक उत्कृष्ट कुरा. म समय खपत कुराहरू परिवार छन् कसरी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, संगीत, सेवकाई जिम्मेवारी आदि. D.C देखि जन्म र फीट खडा. वर्थ, यसको ठूलो कुरा हरेक क्षेत्रमा Godâ € ™ को काम को जंगल को मेरो घाँटी देखि एक भाइ हेर्न.
संगीत भाइ लागि धन्यवाद.
फ्रान्सिस • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:14 छु • जवाफ
निरंतर पारदर्शिता लागि धन्यवाद!
MrAveryBrown • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:19 छु • जवाफ
यात्रा सधैं शिक्षा आफ्नो दृष्टिकोण मा जानीबुझी लगातार भएको छ, प्रचार, र संगीत, जो मलाई प्रोत्साहन र मलाई प्रोत्साहन जारी छ, दैनिक. प्रारम्भिक घोषणा बनेको थियो 2012, म यसलाई एउटा सरकारी टी € ™ wasnâ थाह “अवकाश”, बस एक रणनीतिक पारी अन्य कुराहरूमा ध्यान. अहिले पनि, HEA ™ को नाजुक सन्तुलित प्रचार €, शिक्षा, संगीत, र एक उत्कृष्ट तरिकामा परिवार. Thatâ € ™ को आफ्नो प्रयासहरूलाई उहाँलाई समर्थन गर्न IA € ™ किन जारी हूँ, र उहाँले उल्लेख रूपमा “येशूले प्रभुको छ, र म उहाँलाई आदर गर्न चाहनुहुन्छ…” म भन्छु, यात्रा जाँदै राख्न, आफ्नो जीवन, संगीत र सेवाको मात्रा बोल्छ, एक चरण परे, एक माइक, वा ध्वनि खानको, आफ्नो जीवन र तपाईं आफै जानीबुझी पूरा बाटो, मात्रा बोल्छ.
DavidQuinones • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:21 छु • जवाफ
यात्रा ली…येशूको लागि आफ्नो जीवन र आवेग मलाई amazes!! तपाईं साँच्चै मेरो हृदय आशीर्वाद. म प्रामाणिक मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने कसैले छु र हुनत म तपाईंलाई घनिष्ठ सम्बन्ध छैन, कि प्रामाणिकता आफ्नो संगीत र आफ्नो सन्देश मार्फत बाहिर आउँछ. म दुई वर्ष पहिले Carin विश्वविद्यालय मा फिलाडेल्फिया भेट र यो जीवन-परिवर्तन अनुभव थियो… मेरो सपना सेवकाईमा र संगीत तपाईं संग एक दिन काम गर्न छ…. विश्वास मेरो साथी राख्न!!!
केविन Halloran • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:22 छु • जवाफ
सुन्न ठूलो, यात्रा! प्रचार र शब्द rapping राख्न. प्रभु भण्डारमा छ के हेर्न उत्साहित.
MattShafer • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:22 छु • जवाफ
IA € ™ youâ € ™ फिर्ता पुन संगीत बनाउन खुसी हूँ तर, त्यो भन्दा बढी, IA € ™ पु खुसी youâ कि € ™ पुनः प्रभु तपाईं जान चाहन्छ बाटो निम्न. आफ्नो संगीत, पुस्तकहरू, र सन्देशहरू वर्ष को पछिल्लो दम्पतीले भन्दा मलाई ठूलो उत्थान भएको. तपाईं ती लागि धेरै धेरै धन्यवाद. मेरो प्रार्थना Youâ € ™ पुनः.
माइकल Jimenez • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:50 छु • जवाफ
यात्रा youâ € ™ हामीलाई मसीही Rappers सबै एक प्रेरणा पुन:. हामी प्रत्येक र कुनै पनि निर्णय समर्थन. यसलाई राख
यूहन्ना Widner • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:55 छु • जवाफ
यात्रा ली सबै भन्दा राम्रो अप राम्रो काम मानिस राख्न छ
लोगान • अक्टोबर 8, 2014 मा 11:00 छु • जवाफ
VICTORKHIZ • अक्टोबर 8, 2014 मा 11:06 छु • जवाफ
हो! यस ब्लग पोस्ट यात्राको लागि धन्यवाद! आईटीए € ™ एस के तपाईं संगीत बनाउन तर एकै समयमा खुल्ला अझै हुन् भनेर हेर्न प्रोत्साहन गर्ने मण्डली मा मन्त्रालयले वफादार रहिरहेका छन्. तपाईं एक प्रतिभाशाली यार हो. म सुनुवाई गर्न तत्पर तपाईं फेरि LIVE. तपाईंको लागि प्रार्थना.
हुनेछ • अक्टोबर 8, 2014 मा 11:11 छु • जवाफ
यात्रा, म खुसी तपाईं परमेश्वरको संगीत तपाईं फेरि प्रयोग गर्न अनुमति निर्णय गर्छन् छु. म आफ्नो काम प्रेम, र म नै म परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थप सान्दर्भिक धुनहरू हुनेछ भनेर खुसी छु. यात्रा, के तपाईं यस्तो प्रोत्साहन गरिएको छ, युवा गर्न मात्र, तर हृदय मा जवान गर्न, र दुनिया भर ती. मलाई आशा छ मेरो छोरा Godâ € ™ को हृदय पछि एक मानिस हुन बाहिर जान्छ, यस्तो आफैलाई, र परमेश्वरले सम्भव everyway उहाँलाई प्रयोग गर्न उहाँले अनुमति दिन्छ कि. यो हाम्रो युवा मानिसहरूले तिनीहरूलाई अघि ईश्वरीय उदाहरण छन् महत्त्वपूर्ण छ. परमेश्वरको इच्छाअनुसार राख्न. म द्वारा आज्ञाकारी रहन भनेर विश्वास, परमेश्वरले आफूलाई देखाउन र तपाईंले गर्न निको ल्याउन. धन्य हुनु!
एन्ड्रयू • अक्टोबर 8, 2014 मा 11:41 छु • जवाफ
म प्रेम ली के प्रभु गर्न तिनलाई भनिएको छ गरिरहेको छ कसरी यात्रा. उहाँले प्रभु निम्न र आफ्नो संगीत उहाँलाई आदर छ. के प्रभु तपाईं के गर्न भनिएको छ गर्नेगर.
कालेबले गर्डन • अक्टोबर 8, 2014 मा 1:30 बजे • जवाफ
टी WinterJam मा हेर्न प्रतीक्षा ™ म सकिंदैन!
रबर्ट मई • अक्टोबर 8, 2014 मा 1:32 बजे • जवाफ
म बिस्तारै संगीत गर्न र आफ्नो परिवार र Godâ € ™ को चर्च पूर्णतया प्रतिबद्ध हुन पर्याप्त अनुशासन भनेर हेर्न धेरै उत्साहित छु. टी हुनत आफ्नो एल्बम सुन्न प्रतीक्षा ™ सकिंदैन.
आदर • अक्टोबर 8, 2014 मा 2:48 बजे • जवाफ
Woow यो भयानक छ Trip.I soon.I निश्चित रूप लाग्छ यो एल्बम people.Your संगीत को धेरै स्पर्श रहेको छ बाहिर आउन उदय लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन तपाईं के प्रभु आदर गर्न प्रेरित me.Continue.
आशिष्को सबै न्यूजील्याण्ड देखि बाटो!
RommelAlonzo • अक्टोबर 8, 2014 मा 3:41 बजे • जवाफ
तपाईं bro गर्न म साँच्चै हेर्न! ईन्जिनियरिङ् मा पीएचडी विद्यार्थीलाई छ जो कसैले रूपमा, एक युवा पास्टर र अन्य कुराहरू बीच एक उपासनाको नेता, youâ € ™ पुनः संघर्ष गर्ने राम्रो जीवन पाउन परित्याग गर्न परमेश्वरले तपाईंलाई मलाई प्रेरित गरेको छ दिनुभएको प्रतिभा प्रयोग गर्न बाटो खोज्न. जस्तै नै म आफ्नो नयाँ एल्बम को शीर्षक सुन्नेबित्तिकै, म यो मलाई उठ्नु tellin आईटीए € ™ को समय र उहाँलाई मा राम्रो जीवन भेट्टाउन दिन छैन सम्म को Godâ € ™ को तरिका थियो थाह थियो. पनि म असफल यदि, आफ्नो संगीत मलाई सम्झना दिलाउँछ उहाँले ™ टी € wonâ कि. आफ्नो संगीत र तपाईं बाहिर सन्देश बस प्राप्त गर्न मार्फत आफूलाई राख्न संघर्ष लागि धन्यवाद.
सारा • अक्टोबर 8, 2014 मा 3:59 बजे • जवाफ
तपाईं को लागि धेरै आदर, यात्रा ली. Youâ € ™ परमेश्वरको मानिस पुन:. Youâ सधैं मेरो मनपर्ने Rappers को एक भएको र म टी आफ्नो परिवार र चर्च आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदासम्म पुनः जारी नयाँ संगीत € ™ भनेर youâ आनन्दित हुन couldnâ को छ, ™ € € ™.
म तिमी जस्तो कलाकार अवस्थित भनेर वास्तवमा लागि परमेश्वरको धेरै कृतज्ञता छ. तपाईं, परमेश्वरको माध्यम, मलाई मेरो संघर्ष र विजयी दुवै को बीचमा धेरै प्रेरणा प्रदान गरेको छ, र को लागि भनेर IA € ™ मेरो निष्कपट कृतज्ञता देखाउन गर्न चाहते. आईटीए ™ मेरो सपना को एक s कन्सर्ट मा हेर्न €, या त तपाईं द्वारा न्यूजील्याण्ड भ्रमण वा मलाई आफ्नो शो को एक लागि अमेरिकी यात्रा द्वारा! परमेश्वरको तपाईं र तपाईंको सुन्दर परिवारलाई आशीर्वाद र धेरै माया.
असले • अक्टोबर 8, 2014 मा 5:18 बजे • जवाफ
उत्कृष्ट यात्रा! जहाँ उहाँले तपाईंलाई जान्छ जा राख्न…तपाईं जान र हाम्रो साथ आफ्नो अद्भुत अनुभव सबै साझा कृपया!
ब्रान्डन • अक्टोबर 8, 2014 मा 5:55 बजे • जवाफ
म सधैं भड्काए र Tripâ € ™ को artistry द्वारा प्रोत्साहन छु. म भाइ लागि परमेश्वरको प्रशंसा. म त्यो अटलान्टा गर्न उत्प्रेरित गर्छ आशा त हामी निर्माण गर्न सक्छन्.
निक • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:22 बजे • जवाफ
ErickCorral • अक्टोबर 8, 2014 मा 10:58 बजे • जवाफ
™ टी यो नयाँ एल्बम लागि प्रतीक्षा म सकिंदैन. म मा मसीही हिप हप सुनेर सुरु 2013. मैले सुने पहिलो कलाकार Lecrae थियो. म पहिलो चर्च कपडे सुने देखि म मुग्ध थियो. समय भयो र म एन्डी Mineo बारेमा पत्ता लगाउन सुरु, KB, यात्रा ली, Tedashii र यति मा. यी मान्छे को सबै’ संगीत मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ. पूर्ण रूपमा संगीत मेरो स्वाद परिवर्तन र पनि मेरो विश्वास थप मुछिन मलाई प्रोत्साहन. तपाईं यात्रा धन्यवाद र बाँकी 116. म चाँडै कन्सर्ट मा हेर्न प्राप्त आशा. परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ.
सीबी • अक्टोबर 8, 2014 मा 11:09 बजे • जवाफ
यात्रा, तपाईं संगीत को बाहिर थिए रूपमा, म आफ्नो विश्वास गर्न आफ्नो दृष्टिकोण मा एक चरम फरक देख्यो & अन्य देखि पेसा 116 कलाकार. म हेर्न सकेको छ & तपाईंको यात्रा मार्फत महसुस पिताको हातमा pliable हुनुको आफ्नो नम्बर एक प्राथमिकता भएको छ कि (यसो छैन कि अन्य कलाकारहरुको लागि साँचो € ™ टी ISNA). म youâ € आफ्नो लक्ष्य को आफ्नो धंधा बारेमा गएका ve ™ बाटो लागि पराउँछु. IA € ™ तिम्रो एक प्रशंसक हुन गर्व हूँ & उत्साहित कि तिमी देखि thereâ € ™ को नयाँ संगीत. म यशैया प्रार्थना छु 60:1-2 तिमी माथि & आफ्नो परिवार, म महसुस रूपमा € ™ को thatâ परमेश्वरको महिमा गर्न उदाउँदो आफ्नो जीवन मा चमक कि, youâ अन्तिम वर्ष गरिरहेको के ™ € को छ, गरिएको छ. सलाम!
JoshuaDenim • अक्टोबर 9, 2014 मा 12:04 छु • जवाफ
IA € ™ तपाईं bro लागि खुसी हूँ. मलाई थाहा youâ ™ जे परमेश्वरले तपाईंलाई को सोधेको छ के हूँ €. तर तपाईं भन्न लागि यो आफ्नो सबै भन्दा राम्रो काम yet..Iâ € ™ पु साँच्चै परमेश्वरले संगीत मार्फत आफ्नो हृदयमा बिछाउने गरिएको छ सुन्न उत्साहित छ. परमेश्वरले मलाई तपाईं संगीत मार्फत तपाईं सबै कुरा सिकाउन लागि मानिस र धन्यवाद आशीर्वाद.
PS – 20/20 मालिक थियो!! lol
AustinRoberts • अक्टोबर 9, 2014 मा 12:22 छु • जवाफ
यात्रा, IA € ™ नयाँ एल्बम सिर्जना गरेका तपाईंलाई थाहा पाउँदा खुसी हूँ. IA € ™ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कुराहरूमा ध्यान तपाईं एक समय को लागि संगीत बाट पक्ष कदम तथ्यलाई गर्न बढी खुसी हूँ, तपाईं महसुस कि कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भएको थिए जो थिए. वर्षसम्म मैले माथि तपाईंलाई साथै आफ्नो सँगी emcees केही रूपमा € ™ टी सुनेर थाले म hadnâ यदि किनभने देख्यो छ, के सबै भन्दा मात्र गीत कल, म धेरै बरु आफ्नो शब्द कल, वा बरु गीतहरू, गेय करार र preachings. आफ्नो संगीत सुनेपछि अघि, म अँध्यारो ठाउँमा थियो. म परमेश्वरको काखमा टाढा खसेको थियो. आफ्नो संगीत, साथै अन्य कलाकार, नजिक परमेश्वरको मलाई ल्याए र मलाई आफैलाई राम्रो गर्न उत्प्रेरित. मलाई परमेश्वरको नजिक आउन प्रेरक र मलाई उत्प्रेरणा लागि आफ्नो श्रेणी मा साथै तपाईं अन्य emcees धन्यवाद. म तपाईंलाई समर्थन र तपाईं € स्री किनभने तपाईं के ™ टी तपाईं आफैलाई लागि के कुराहरू के. कुनै. तपाईं प्रभुको नाम मा उनलाई के र म आदर यति भनेर. तपाईं के कुराहरू गरिरहेको गर. परमेश्वरको ISNA € ™ टी अझै तपाईं संग काम गरेको. परमेश्वरको आशिष.
Lillian • अक्टोबर 9, 2014 मा 8:59 छु • जवाफ
सही मेरो मुखबाट शब्दहरू लिए. IA € ™ तपाईं गर्व हूँ, यात्रा, र सबै कुराको लागि उत्साहित youâ € ™ गर्दैछौ पुन:. :) यसलाई जारी राख्नुहोस्!
GabeTaviano • अक्टोबर 9, 2014 मा 11:15 बजे • जवाफ
केही बस didnâ € ™ भविष्यवाणी आफ्नो शब्द टी पकड, तपाईं बस परमेश्वरले संकेत आफ्नो ब्रेट Favre मा रहेको werenâ कि € ™ टी.
DrowningInGrace • अक्टोबर 11, 2014 मा 11:10 छु • जवाफ
म उहाँको वचन आफ्नो परिश्रम र समर्पण लागि परमेश्वरको प्रशंसा. आफ्नो एल्बम मा खर्च समय सम्म जारी गरिएको छ कि ट्रयाक प्रस्ट छ. म आफ्नो काम र सेवाको प्रेम र परमेश्वरले तपाईंलाई मार्फत ख्रीष्टको शारीरिक लागि भण्डारमा छ के गर्न तत्पर.
ग्रेस र शान्ति.
जुलिया Rubbed • अक्टोबर 14, 2014 मा 9:34 छु • जवाफ
म भर्खर (4 दिन पहिले) साल्ट लेक सिटी मा कन्सर्ट मा बस तपाईं देखे, बाहिर. म बिल्कुल तपाईं आफ्नो गीतहरू मा त पारदर्शी थिए बाटो प्रेम. तपाईं त स्पष्ट सुसमाचार प्रचार, धन्यवाद. धन्यवाद येशूको नाम मा संसारको आशा ल्याउन लागि धेरै. तिमीलाई प्रेम गर्छु!
जुलिया Rubbed • अक्टोबर 14, 2014 मा 9:35 छु • जवाफ
tamsyn • अक्टोबर 19, 2014 मा 3:32 बजे • जवाफ
नमस्ते ली यात्रा. म आफ्नो गीत मीठो विजय प्रेम. म आफ्नो गीत को प्रामाणिकता प्रेम. यसको साँच्चै जस्तै इमानदारीसाथ मसीहीको रूपमा मेरो संघर्ष संग सम्बन्धित सक्ने मान्छे छन् मलाई महसुस मदत. यसको सजिलो छैन कारण. कसरी देवता आज्ञाकारी कारण तपाईंले प्रयोग साक्षी, अर्थात् दुखाइ बावजुद विश्वासी बाँकी- दुवै प्रोत्साहन र बाहिर ट्याप मलाई चुनौती, तर on.Christ थिचेर राख्न यू को सु डु गर्व छ. परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ! Tamsyn, दक्षिण अफ्रिका
JesiliaLeaupepe • अक्टोबर 21, 2014 मा 9:30 बजे • जवाफ
मेरो श्रीमान् र म यो नयाँ एल्बम लागि उत्साहित छन् र उदय देखि हालसम्म जारी गरिएको छ कि हरेक गीत सुने छन्. तपाईंले यसलाई ब्रो मा ठूलो सामान पायो. WEA € ™ पुनः खुसी आफ्नो नयाँ एल्बम खरीद द्वारा तपाईं समर्थन गर्न. (खैर, youâ € ™ मेरो पति एउटा विशाल प्रेरणा पुन:. HEA ™ को एक ठूलो प्रशंसक s € rapping तपाइँको-बाट, आफ्नो पुस्तक खरीद गर्न, र आफ्नो पत्नी र बच्चाहरु र कसरी तपाईंको प्रेम प्रशंसा गर्न तपाईं यसलाई साक्षात्कार मा सबै समय प्रदर्शन).
परमेश्वरले तपाईंलाई bro आशीर्वाद. परमेश्वरले तपाईंलाई बल प्रदान गर्न जारी हुन सक्छ तपाईं आफ्नो सबै जिम्मेवारी सामना गर्न आवश्यक. क्यालिफोर्निया मा खाडी तपाईं सबै बाटो समर्थन.
-को Leaupepeâ € ™ को.
Liz • अक्टोबर 23, 2014 मा 12:58 बजे • जवाफ
तपाईंले मलाई र धेरै अरूलाई यस्तो आशिष् गरिएको छ. परमेश्वरको स्पष्ट तपाईंको कमजोरी मार्फत पनि देखाइएको छ.
उल्लेख: येशू ख्रीष्ट साम्राज्य | क्रिश्चियन Rapper यात्रा ली â € ~I कहिल्यै अवकाश प्राप्त प्रशंसक बताउँछ’ बाट हिप हप खेल
उल्लेख: यात्रा ली उहाँले संगीत बाट अवकाश प्राप्त कहिल्यै भन्छन् | BCNN1 WP
बिली • नोभेम्बर 12, 2014 मा 11:22 बजे • जवाफ
भाइ म आफ्नो एल्बम डाउनलोड र maaaannnn केही गीतहरू लगभग मेरो आँखाले आँसु ल्याए. तपाईं सबै मेरो जीवन मा एक विशाल आशिष् भएको प्रभु मानिस reppin लागि धन्यवाद र आफ्नो संगीत मलाई नजिक येशूले ल्याइएको. #116
यूहन्ना • नोभेम्बर 21, 2014 मा 6:03 छु • जवाफ
यात्रा, म नयाँ एल्बम प्रेम. काम जानुअघि यो बिहान सुन्दै. त्यसैले उत्साहजनक!
अबीगेलले • अगस्ट 10, 2016 मा 4:13 बजे • जवाफ
म आफ्नो संगीत यात्रा प्रेम!!!!! म प्रेम कसरी तपाईं आफ्नो संगीत मार्फत सुसमाचार प्रतिनिधित्व. धन्यवाद!! परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ!!!